Kenya oo lacag ku bixineysa soo qabashada labo Sargaal oo katirsan Al-Shabaab - Wargeyska Faafiye
Kenya oo lacag ku bixineysa soo qabashada labo Sargaal oo katirsan Al-Shabaab
Dowlada Kenya ayaa baadi goob xoogan waxa ay ugu jirtaa labo Saragaal oo katirsan Xarakada AL-Shabaab, kuwaa ay ku eedeeyeen in ay wax ka maleegeen weeraradii dadka badan lagu laayay ee dhawaan ka dhacay Magaalada Mandheera.
Booliiska Dalka Kenya ayaa ku eedeeyya Weeraradii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Dalka Kenya in ay ka dambeeyeen Labo sargaal oo katirsan Al-Shabaab kuwaa oo asalkoodu Kenyan yahay.
Qoraal ka soo baxay xafiiska Agaasimaha Waaxda Baarista Dambiyada Kenya ee CID, ayaa lagu sheegay in ragga lagu kala magacaabo Mohamed Mohamud (Dulyadeyn) iyo Ahmed Imaan Cali oo lagu naaneyso (Abu Zinira), looga shakisan yahay iney ka dambeyeen weeraradii ka dhacay agagaarka Magaalada Mandheera 22 November iyo 1-dii bishaan December ee lagu dilay dadka tirada badanaa. Maxamed Maxamuud (Dulyadeyn) waxa uu ka soo jeedo Magaalada Gaarisa ee gobalka Waqooyi Bari Kenya, waxaana ninkan la sheegay in uu adeegsado magacyo kala duwan sida Sheekh Mohamed, Dulyadeyn, Gacma-dheere iyo Maxamed Kuno, waxa uuna ninkan hada yahay sida Sirdoonka Kenya sheegeen Taliyaha Ciidamada Shabaab ee Gobolada Jubooyinka.
Axmed Imaan Cali (Abu Zinira), oo ah qofka labaad ee baadi goobayaan Ciidamada Kenya ayaa ka tagay Xaafada Majengo ee Magaalada Nairobi, hadana uu Madax ka yahay Al Shabaab qeybta soo saarista Muuqaalada ay duubaan, waxa uuna ninkan ka baxay Jaamacada Jomo Kenyatta- waxa uuna bartay Culuumta Beeraha iyo Teknolojiyada,
Dowlada Kenya ayaa ka codsatay Shacabka wadankeeda in ay gacan ka geestaan soo qabashadan labadan sargaal, waxa ayna u balan qaadeen qofkii keena xog ragan lagu qaban karo in la siinayo lacag abaal marin ah oo gaareyso 2 Milyan oo lacagta Dalkaasi ah.
Al-Shabaab ayaa dhoor mar Gudaha Dalka Kenya waxa ay ka fuliyeen Weeraro qasaaro badan dhaliyay oo lagu dilay Askar iyo shacab badan oo u dhashay Dalkaasi, waxaana Weeraradii ugu dambeeyay uguna qasaaraha badnaa ee ka dhaceen Magaalada Mandheera.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsA/Sunna oo weerarayso Shabaab.Maraykanka oo diiday xoojinta xakamaynta hubka laga iibiyo shacbiga.Somali immigrant: 'I have to do anything I can to feed my familyKenya tells separatist group: surrender or face arrest.Al-Shabaab la wareegtay Ceelbuur.